Serivisy fiantohana kalitao any China Die Casting Shop - Minghe Casting
Ahoana no fomba fifehezana kalitao amin'ny fizotran'ny vokatra sy ny vokatra
Ny maha-zava-dehibe ny fifehezana kalitao amin'ny indostrian'ny casting
Ny fanaraha-maso kalitao dia fanaraha-maso ankapobeny ny vokatra sy ny fizotry ny famokarana, amin'ny fizotran'ny fanamboarana, ny fanaraha-maso ny kalitao dia tena ilaina mba hiantohana ny vokatra amboarina mifanaraka amin'ny fenitra sy takian'ny orinasa, indostria ary mpanjifa. Ho fanampin'izany, ny fifehezana kalitao araka ny tokony ho izy ny fizarana fanariana dia hisorohana ireo vokatra simba, hampihena ny risika, hiantohana ny refy sy ny kalitaon'ny refy, hitahiry ny loharano, hampihena ny vidiny ary hanatsara ny fahombiazany. Tsara ho an'ny mpanamboatra sy ny mpanjifa izany.
Noho izany, ny rafitra fanaraha-maso kalitao mahomby dia tokony hatsangana manomboka amin'ny famaritana sy fametrahana ny fenitra kalitaon'ny ampahany tsirairay. Ilaina ihany koa ny mpiasa fanaraha-maso kalitao sy fanaraha-maso kalitao matihanina.
Orinasa Die Casting dia ampiasaina amin'ny famokarana fifanarahana sy serivisy prototyping haingana. Ny fandeferana dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny fetra mikroskopika. Ohatra, ny valin'ny tsipika solika dia kely noho ny 1mm lehibe noho izay voalaza. Raha ampiasaina dia ny vokany dia mety ho fiara vaovao an'arivony mamoaka solika. Ny valiny tsy ilaina sy tsy ampoizina toy izany dia mety hitranga amin'ny aerospace, tranobe sambo, fitaovana ary orinasa hafa. Ny fisorohana ireo lesoka ireo dia ny fifehezana kalitao.
Ny fomba fifehezana kalitao
ISO 9001: 2015 fanamarinana
Minghe dia orinasan-tsambo maty maty antonony. Noho izany, fantatray ny fifehezana kalitao Machining CNC no vato fehizoron'ny orinasanay. Ao amin'ny fivarotanay, ny mpiasa rehetra dia mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny faritra.
Rafitra fitantanana kalitao ISO 9001
Manana ISO9001: fanamarinana fitantanana kalitao 2015 isika, raha ny kalitao dia mihoatra ny fanamarinana fotsiny. Ny orinasan-tsika dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao ilaina amin'ny faritra anatiny, tato anatin'ny taona vitsivitsy, mampiasa rafitra ERP izahay amin'ny fitantanana ny famokarana, noho izany izahay dia afaka miatrika ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famokarana - manomboka amin'ny teny nalaina voalohany ka hatramin'ny fanaterana farany.
Fanaraha-maso Dimensional mandritra ny casting
Manana fahaiza-manao fanaraha-maso matanjaka ao an-trano izahay. Satria nanome fitaovana fanaraha-maso refy ilaina rehetra izahay, toa ny CMM, fitaovana fandrefesana sary, sns.
Manana fomba fanaraha-maso hentitra toa ny fizahana voalohany izahay, ny fizahana fizahana ary ny fizahana farany. Afaka manome toky izahay fa ny fanariana maty rehetra na ny faritra hafa dia nojerena sy ekena alohan'ny fanaterana.
Ny kalitao dia singa lehibe amin'ny indostria rehetra, tsy ankanavaka amin'ny Casting. Mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana sy hisorohana ny olana amin'ny kalitao rehefa tonga eo anilan'ny mpanjifa ny vokatra dia hampiasa milina fandrefesana sy fitaovana maro karazana izahay hanamarinana azy ireo amin'ny fizotran'ny fanariana anay. Minghe dia mandray hevi-dehibe sy fahaiza-manao mifehy kokoa ny vokatray ho an'ny mpanjifa manerantany. Mifantoka amin'ny famoahana die na fanaraha-maso kalitao amin'ny faritra hafa ho an'ny tetikasa tsirairay i Minghe, hamafiso fa mahazo ny vokatra tadiavina ny mpanjifa tsirairay.
1. Mianara momba ny tontolon'ny indostria
Miorina amin'ny fenitra samihafa amin'ny indostria isan-karazany, rehefa nahazo baiko izahay, ankoatry ny mifantoka amin'ny sary famolavolana, dia mila mahatakatra ny tontolon'ny indostria koa isika. Ohatra, volana maromaro lasa izay, nahazo sary an'ny mpanjifa vaovao avy amin'ny sehatry ny fitsaboana izahay. Sambany izahay niara-niasa tamin'ny mpanjifa avy amin'ny sehatry ny fitsaboana. Avy amin'ny sary, ny fandeferana ihany no avo dia avo. Ary tsy nahita fepetra manokana hafa avy amin'ny mpanjifa izahay. Rehefa voamarina ny vidiny, ary ekena ny zavatra rehetra, mazava ho azy fa nahazo baiko mpividy tao anatin'ny fotoana fohy isika. Saingy taorian'ny nahatongavan'ireo santionany teo anilan'ny mpanjifa dia nampandrenesinay ny mpanjifa iray fa nolavina ireo santionany ireo satria tsy mifanaraka amin'ny fitaovana fandrefesany. Rehefa avy nanamarina sy nifampiraharaha izahay dia hitantsika fa olan'ny fitaovanay fandrefesana nampiasainay teo anilanay. Na dia manao zavatra betsaka aza izahay hifehezana ny kalitaon'ny fizotranao, mbola manana olana toy izany koa izahay mivoaka. Ahoana ny fanatsarana azy? Noho izany, mila mianatra momba ny tontolon'ny indostria isika.
2. Fantaro ny famolavolana ny vokatra
Rehefa mandefa sary an'ny vokatra farany ny CAD, ny injenieranay sy ny mpamolavola antsika dia handinika amin'ny antsipiriany ny famolavolana ary hahatakatra tsara ny famaritana sy ny fepetra takian'ny mpanjifa, hijery ny antsipiriany tsirairay alohan'ny famokarana. Hampiasainay ny vahaolana mahomby indrindra amin'ny famokarana ny anjaranao, hifehezana ireo anton-javatra mandritra ny fizotry ny famokarana, ary hiantohana ny fanatanterahana ireo fitakiana.
3. Zahao ireo faritra misy fitaovana fandrefesana marina
Ny mpandraharaha milina fandrefesana matihanina ao Minghe dia hiara-hiasa amin'ireo ampahany farany aorian'ny milina. Misy fitaovana fandrefesana mandroso isan-karazany ankehitriny azo ampiasaina amin'ny fandrefesana be dia be ny fitsirihana, toy ny refy, ny hamafiny, ny loko, ny fandeferana, sns. Ireo mpanara-maso dia mety hanao fizahana amin'ny ampahany na eo amin'ny masinina izany na aorian'ny fanesorana azy amin'ny masinina. Go / no-go Gage, micrometers, CMM (Coordinate Measuring Machine), In-process probing ary Air Gage dia ampiasaina amin'ny fandrefesana fitaovana sy fitaovana.
4. Ataovy ny fizahana rehefa mandeha ilay ampahany
Indraindray, mila mampihatra fanaraha-maso kalitao isika rehefa mandeha ny ampahany milina, mba hamantarana aloha ny olana ary hanamboarana ilay ampahany alohan'ny hamaranana. Misy ny fandidiana azo atao mba hanitsiana ny masinina mba hihazonana fandeferana henjana kokoa, toy ny fanitsiana ireo sampana fitaovana hamela stock be loatra, avelao ny milina hametahana ilay sangan'asa, handrefesana izay nataon'ilay fitaovana, sy maro hafa. Izy io dia mety indrindra ho an'ny vokatra vaovolavolaina.
5. Mifampiresaha amin'ny mpanjifa
Matetika, ilay olona mividy ny vokatra dia mahalala tsara ny fiasa sy ny fitakiana fitiliana. Ka aorian'ny nahazoana ny fanontanian'ny mpanjifa dia tokony hanana fifandraisana ampy amin'izy ireo isika. Misy fepetra takiana manokana ve? Inona no ilana ilay ampahany? Ahoana ny fomba hijerena azy ireo? Fitaovana fandrefesana na mpanjifa milina inona no hampiasaina?
Ny lisitry ny fitaovana fandrefesana
Leader CMM 1 Mametraka
Fandraisana an-tanana CMM 1 napetraka
Tetikasa sy mikrometatra
Fandrefesana ny fifantohana